Dhibayaasha Dambiyada iyo “Fiisaha U” | LawHelp Minnesota
Dhibayaasha Dambiyada iyo “Fiisaha U”
Victims of Crime and U-Visas (PDF)402.98 KB
Fiisaha U du (U visa) ama martabada U ee muhaajirka la siiyaa waxaa marmarka qaarkood la siiyaa dadka aan ahayn muwaadiniinta Mareykanka ah (U.S.) ama aan degaansho rasmi ah la lahayn ee ah dhibanaasha dambiyada qaakood loogu gaysto Mareykanka (U.S.). Hadii adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah (xilo, ilmo, walaal, waalid) uu yahay dhibane dhib loo gaystay, waxaa jiri kara qaabab adigu aad martabad uga heli karto laanta socdaalka (immigration). Waxaa dhici karta inaad awoodo inaad codsato fiisaha U.
Fiisaha U ama martabada U ee muhaajika la siiyaa waxa uu adiga ku siin 4-sanno oo sharci aad ku joogi kartid wadanka, 4-sanno oo warqad shaqo ah, iyo fursad aad uga badbaado masaafurin ama saarid ay amraan qaar ka mid ah maxkamada laanta socdaalka.
Ciddee ayaa codsan karta fiisaha U?
Hadii adiga, xilo, ilmahaaga, walaalahaa, ama waalidkaa ay yihiin dhibanayaal dambi laga galay. Waxaa dhici karta inaad codsato martabada U. Xataa hadii qofka qoyska ka tirsan ee dambiga looga galay Mareykanku (U.S.) uu yahay muwaadin Mareykan (U.S.) ah waxaa dhici karta inaad wali xaq u yeelato martabada U.
Hadii aad codsanayso martaba U, xilahaaga iyo ilmahaaga aan guursan ee ka yar 21 sanno waa ay kula codsan karaan adiga da’ kastaba ha jiraane. Hadii aad ka yar tahay 21 sanno kolka aad codsanayso martabada U, waalidkaa iyo walaalahaaga ka yar 18 ka sanno ee aan wali guursani iyana waa ay kula codsan karaan.
Sidoo kale, hadii aad ahayd dhibane loo gaystay dambiyada xaqqa loogu yeesho martabadan oo ka dhacay wadanka (U.S.) dhexdiisa meel kasta ha noqotee, waxaa dhici karta inaad codsato fiisaha U. Waxaa iyana dhici karta inaad codsato fiisaha U hadii aad ahayd dhibane dambiga loo geystay isagoo wadanka (U.S.) meel dibada ka ah jooga laakiin dambigaasi uu xadgudub ku ahaa sharci wadanka (U.S.) uu leeyahay. Waa aad codsan kartaa fiisaha U xataa hadii aadan hada joogin wadanka (U.S.).
Ma aha in dhamaan dhibanayaasha dambiyada laga galaa ay heli karaan fiisaha U. Waxa ay ku xiran tahay dambiga iyo sida uu dambigu kuu saameeyey iyo waxyaabo kale. Eeg qaybaha hoose ee xaq u yeeladka ku saabsan.
Hadii aad aaminsan tahay in adiga ama qof kale oo qoyskaaga ahi ay dhici karto inuu xaq u yeesho martabadan, wac qareen qaabilsan sharciyada laanta socdaalka si uu kuu caawiyo.
Dambiyo caynkee ah ayaa xaq u yeesha?
Dhibanayaasha galmada xoogid ah loo gaysto iyo dhibanayaasha dagaalka qoyska dhexdiisa ah ayaa codsan kara fiisaha U. Kuwani waa liiska dhamaan dambiyada xaqqa u leh. Ogow: dambiyada la midka ah kuwan ama isku dayga gaysiga dambiyo ayaa iyana la adeegsan karaa si loo codsado martabada muhaajirka ee U.
Galmo xoogid ah
Xiriir galmo oo tacadi leh
Ku takri falad galmo
Xoog ku haysasho
Xanibaad sharci-darro ah
Dilid ka’ma ah
Gacan qaad dambi kabaa’ir ah
Makhraati u Caga juglayn
Is hortaagid nimaadka cadaalada
Musuqmaasuqa qandaraasyada xoogsatada (ogaan u qorosho, u qalqaalin, qorosho qof jooga dibada (US) iyadoo ujeedaddu tahay in lagu keeno wadanka US heshiis been ah.
Maxaa ka dhigaya inaan xaq u leeyahay?
Waa inaad cadeyso kuwan soo socda:
Adiga (ama qof qoyskaaga ka mid ah) uu yahay dhibane dambi laga galay. Waxa aad u baahan tahay warbixinada bilayska si aad u cadeyso taa. Cadeymaha kale iyada wax waa caawiyaan, sida qoraalada caafimaad, warqado ay soo qoraan makhraatiyaal ogaa dambiyada. Waxaad kaloo u baahan tahay inaad qorto oraah dhaar ah oo ku saabsan xaqaa’iqa dambiga iyo sida dambigu uu u saameeyey noloshaada. Hubi inaad ku darto warqada magacaada oo qoran, saxiixaaga, iyo taariikhda. Khasab kugu aha inaad ku hor saxiixdo qof nootaaya leh, laakiin waa aad sameyn kartaa hadii aad rabto.
Adiga (ama qof qoyskaaga ka mid ah) uu lahaa ama hadda u wali leeyahay dhibaatooyinka waaweyn oo jirka ama caadifada ah oo dambiga awgii u soo gaaray. Tusaale ahaan, in caafimaad darro kuu haysato dambiga awgii, waydii dhaqtarkaagu inuu kuu qoro warqad ku saabsan dhibaatooyinkaaga caafimaad. Ama hadii ay ku haystaan dhibab dhanka caadifada ah, waydii in dabiibahaaga ama la taliyahaagu uu kuu qoro warqad ku saabsan dhibaatooyinkaaga. Waxaad sidoo kale ka codsan kartaa cid walba oo og sida dhibku kuu soo gaaray inay kuu qorto warqad. Hadii aadan u tagin dhaqtar ama dabiibe laakiin tacadi laguu gaystay, ku tilmaam tacadiga oraah qoraal ah.
Aad ka caawisay, aad ka caawinayso, ama aad ka caawin doonto mas’uuliyiin inay dambi baaraan ama ay maxkamadeeyaan cid. Waxa aad u baahan tahay inaad hesho Shahaadada Weyn ee (Form I-918 Supplement B). Kala hadal qareen helida shahaadada ka hor inta aadan la xiriirin hay’ada sharci ilaalinta. Mas’uul ka warqaba sida aad u caawisay baarida dambiga ayaa awood loo siiyaa inuu ku siiyo shahaado saxiixan. Mas’uulkaasi waxa uu noqon karaa:
Hawlwadeen hay’ada ilaalinta ilmaha
mas’uul laanta socdaalka ah, ama
mas’uuliyiin gobolka ama federaal ah
Lagu ogolaan karo, ama aad heshay ruqso. Laanta Socdaalku waxa ay isticmaashaa kalmada “la ogolaan karo” si ay uga hadasho waxyaabaha taariikhdaada ka midka ah ee kaa hor istaagi kara inaad fiiso ama martabad hesho sida martabada U ee muhaajirka ee ku meelgaar ka ah. Qaar ka mid ah waxyaabaha kaa hor istaagi kara inaad noqoto qof “la ogolaan karo” waa:
si sharci-darro ah ku soo gelida wadanka Mareykanka (U.S.)
gaysiga dambiyada qaar ka mid ah – xataa hadii aan lagugu maxkamadayn ama aadan xabsi aadin ama aad kaliya bixisay ganaax.
Been u sheegtay mas’uuliyiinta laanta socdaalka
Sheegashada inaad tahay muwaadin Mareykan ah (U.S.) adigoon ahayn muwaadin
si sharci-darro ah u codeynta
ka tagida (U.S.) ka dib kolkii aad sharci-darro ku joogtay halkan ugu yaraan mudo 6 bilood ah
Hadii aan tahay qof aan la ogolaan karin, waydiiso laanta socdaalka saamixid. Codsiga saamixida waxaa la yiraa Codsiga Foomka 1-192 (Form I-192) ee Ruqsaha Ogolaanta soo Gelida iyadoo la yahay Muhaajir aan soo guurin.
Kala tasho qareen taariikhdaada. Qareenku waxa uu kaa caawin inaad go’aansato inaad u baahan tahay inaad xareysato codsiga saamixida iyo hadii ay jirto cadeyn ay tahay inaad la dirto codsigaaga. Waxa aad u baahan tahay inaad qorto oraah sharxaysa sababta ay tahay in laguugu ogolaado inaad wadanka sii joogto iyo sababta aadan u doonayn inaad ku noqoto wadanka aad u dhalatay.
Waa maxay faa’iidooyinka Martabada U ee Muhaajirku?
Hadii laguu ansaxiyo martabadan:
waxaad heli ogolaansho aad Mareykanka (U.S.) ugu noolaato 4 sanno
waxaad heli ogolaansho aad uga shaqeyso Mareykanka (U.S.) 4 sanno
ka dib 3 sanno kolka aad ku noolaato Mareykanka (U.S.) adigo leh martabada U, waxaa dhici karta inaad awoodo inaad codsato deganaansho rasmi ah (green card)
waxaa dhici karta inaad ku dari karto codsigaaga xilagaaga, ilmaha yaryar, waalidka iyo ilmaha aan wali guursan. Xubnaha qoyska ah ee aad caawin kartaa waxay ku xiran tahay da’daada ama da’dooda
Xataa hadii aadan ku darin qaraabada hada, waxaa dhici karta inaad ha dhow caawin karto.
Muddo intee le’eg ayey qaadan in laanta socdaalku ay ku eegto kiiskayga fiisaha U?
Hadda oo ah Oktobar 2020, waxa ay qaadataa 5 sanno ku dhawaad in laanta socdaalku ay dib u eegto kiisaska fiisaha U da. Laanta socdaalku waxa ay uga shaqeysaa hawsha codsiyada sida loo soo kala hor xareysto. Sidaa drteed, waa muhiim inaad isku daydo inaad u xareystao codsigaaga fiisaha sida si ugu dhaqsaha badan si aad booskaaga u qabsato. Ka eeg Check how long inta ay ku qaanayso laanta socdaalku inay go’aan ka gaarto codsiyada fiisaha U da adigoo galaya shabakada www.uscis.gov.
Hoos u riix falaarta ilaa aad tagto “Maamul kiiskaaga” (“Manage Your Case”)
Riix “Eeg waqtiga Hawsha” (“Check processing Times”)
Hoos u riix falaarta ilaa aad tagto “Foom” (“Form”) hoos gee falaarta ka dibna dooro “I-918 Petition for U Nonimmigrant Status”
Hoos u riix falaarta ilaa aad tagto “Xafiiska Goobta” ama Rugta Adeega” (“Field Office or Service Center”) hoos gee falaarta ka dibna dooro xafiiska haya kiiskaaga. Dadka badankiisa xafiiskani waa “Rugta Adeega ee Vermont” (“Vermont Service Center”)
Ogow: hadii aad ka heshay ogaysiis laanta socdaalka oranaya kiiskaagii waa loo gudbiyey, waa inaad doorato “Rugta Adeega ee Nebraska” “Nebraska Service Center”
Hoos u riix falaarta ka dibna eeg taariikhda ku qoran taxaalka dhinaca ugu fog ee midig. Laanta socaalku hada waxa ay ka shaqeynaysaa codsiyadii la oo diray waqtigaa ama ka hor taariikhdaa.
Ogow: Waxaa jira xadidaad ah in 10,000 oo fiisayaasha U ah uun la ansaxiyo sannad walba. Hadii laanta socdaalku ay dib u eegto kiiskaaga ayna u qabto inaad xaq u leedahay fiisaha U, laakiin fiiso U ah aan kolkaa la heli karin, ma ay ansaxin karaan codsigaaga. Kolkaa waa inay ku galiyaan waxa la yiraa “falka dib u dhigida martabada.” Waxa ay kuu ogolaan inaad codsato warqada shaqada inta aad sugayso fiisaha U da. Warqada shaqadu waxa ay shaqeyn muddo 2 sanno ah. Waa inaad cusboonaysiisataa warqadaada shaqada ilaa iyo inta laga gaarayo go’aan kama dambays ah fiisahaaga U da. Helida falka dib u dhigida martabada ma uu bixiyo hubaal ah in fiisahaaga U da la ansaxin doono. Hadii laguu ogolaado falka dib u dhigida martabada, waxaa dhici karta inay sannado qaadato ka hor inta fiiso U ah la ansaxinayo.
Siddee ayaan uga ogaan karaa wax kale arrintan?
Hoos u riix falaarta ilaa aad ka tagayso bogga hoostiisa ka dibna riix “Humanitarian” ee hoos timaada “Topics”
Riix falaarta hoos u jeeda ee ku xigta “Humanitarian”
Riix (“Victims of Human Trafficking & Other Crimes”)
Riix (“U nonimmigrant Status”)
Lambaro Telefano Muhiim ah:
Mid-Minnesota Legal Aid –Xafiiska Minneapolis: 612 334-5970
Minnesota 2-1-1: ka wac gobolka oo dhan si laguu caawiyo
DIGNIIN: Aad iyo aad u taxadar ka hor intaa aadan u gudbin codsi laanta socdaalka. Marmarka qaarkood, hadii codsigaaga la diido, waxaa lagu gelin karaa hanaanka dadka la masaafurinayo. Khatartu hada waa ka weyn tahay tii waagii hore. Hadii aadan la hadlin qareen ka dib Luulyo 1, 2018, mar kale la hadal mid ka horta aadan xareysan. Hadii aad horey u gaysatay dambiyada qaarkood – xataa hadii aadan waligaa maxkamad tagin ama xabsi gelin oo aad bixisay uun ganaax, aad been u sheegtay dowlada ama waxyaabo kale waxaa lagu gelin karaa hanaanka dadka la masaafurinayo. XUSUUSNOW: Laanta socdaalku waxa ay eegi kartaa DHAMAAN taariikhda oo dhan, xataa hadii dambiyada lagaa tirtiray.
Ka hel qareen caawimaad qaabilsan sharciyada laanta socdaalka. Qareenku waxa uu kaa caawin karaa inuu hubiyo in wax walbaa hagaagsan yihiin!
Mashruucan waxaa gargaara Deeqa Lambarkeedu yahay (Grant No. 2016-WL-AX-0052) oo ay fidisay Xafiiska ka Hortagga Dagaalka ka Dhanka ah Haweenka, Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka (U.S.), (U.S. Department of Justice). Afkaarta, gunaanadyada, gaba-gabooyinka iyo talooyinka lagu muujiyey daabacaadan/muuqaalkan waa kuwa uu leeyahay qorahu, mana aha kuwo matala argtiyada, Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka (U.S.), ama Xafiiska Dagaalka ka Dhanka ah Haweenka.